Nepali Rajneeti | मन्त्री रामवीर लाई रबि को प्रश्न जाबो एउटा सिलिन्डर दिन नसक्ने!अनि गाडीमा झण्डा हल्लाउँदै हिन्ने!
मन्त्री रामवीर लाई रबि को प्रश्न जाबो एउटा सिलिन्डर दिन नसक्ने!अनि गाडीमा झण्डा हल्लाउँदै हिन्ने!
बैसाख ३०, २०७८ बिहिबार २८४ पटक हेरिएको
पत्रकार रवि लामिछानेले।
मन्त्री रामविर मान्धरलाई भने एउटा जाबो सिलिन्डर ल्याउन सक्नुहुन्न गाडिमा झण्डा फरफराउदै हिड्ने ? रविले अाफुले १०३ वटा सिलिन्डर दुख गरेर खोजेर ल्याएको तर मन्त्रीले केही नगरेको मा चर्काचर्की भएको छ भिडियो अन्तिममा छ पूरा हेर्नू होला ।
यो पनि:अपडेट: जनमैत्री अस्पतालमा अहिले ३० जना बिरामी भर्ना भइ उपचाररत हुनु हुन्छ, ३ जना ICU मा हुनुहुन्छ, इमर्जेन्सीमा दिन भर बिरामीको चाप रह्यो, ९८% बिरामीमा अक्सिजन प्रयोग भएको छ भने १ जना लाई त हाई फ्लोमा अक्सिजन दिनु परेको स्थिति छ।अक्सिजन तथा अक्सिजन सिलिन्डरको हाहाकार भएको छ।
चोक चोक, गल्ली गल्ली पुगेर सिलिन्डर जुटाउने काममा हामीपनि लागिपरेका छौ। सर्वसाधारण नागरिकका हैसिय तले हामी सरकारलाई सघाउन चहान्छौ। अस्पतालहरुले हात उठाएसके,जति आक्रोश पोखेपनि आशा सरकार कै हो जुन अझै मरेको छैन।
सदनमा विश्वास गुमाएपनि जन ताको मनमा विश्वास नगुमाउ सरकार।मान्छे बचाउ,स्थिति भयावह देखिन्छ। नोट: साताभर चल्ने “कामका कुरा” कार्यक्रमको प’रिक्षण प्र’स्तुतिमा म सहभागी हुन केही दिन पाउने छैन।
परिक्षण चाहिँ निरन्तर छ,प्राविधिक टोलीले Backend मा काम गर्दैछ। अहिले लाई अक्सिजन भन्दा ठूलो केही देखिन। सकेको गर्दैछौ, गर्छौ।